Dastabej » भेरीका मेसु डा. थापा भन्छन– हामी मुखदर्शक भएर बस्नेबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
भेरीका मेसु डा. थापा भन्छन– हामी मुखदर्शक भएर बस्नेबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । – Dastabej
भेरीका मेसु डा. थापा भन्छन– हामी मुखदर्शक भएर बस्नेबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालगन्ज । भेरी अस्पतालको कोरोना बेड भरिएपछि सुपरीडेन्टेन्ट डा. प्रकाश थापाले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे, स्थिती नियन्त्रण बाहिर । कोभिडका लागि छुट्याइएको १४२ बेड भरियो । संक्रमित आउने क्रम जारी छ । हामी मुखदर्शक भएर बस्ने बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । हरेकले आफ्नो ठाउँबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरीछ । डा. थापाले सार्वजनिक गरेको पोष्टले यहाँको अवस्था कति दर्दनाक बनेको छ पुष्टि गर्छ । संक्रमित थपिदै छन् तर आइसोलेसन अभावका कारण संक्रमितहरु उपचार पाउनबाट बन्चित हुन थालेका छन् । यही अवस्था रहिरहने हो भने नेािलगन्जको अवस्था अझै दयनीय हुनसक्ने खतरा बढेको छ । भेरीका बेड भरिएपछि जटिल अवस्थाका विरामीहरु अझै समस्यामा परेका छन् । डिसचार्ज भएपछिमात्रै अर्को संक्रमितले बेड पाउने अवस्था रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा पनि आइसोलेसन बेडदेखि भेन्टिलेटरसम्म सबै भरिएको छ । जिल्ला कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार बिहीबार मात्रै तीन सय ८८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । जिल्लाभरि एक हजार दुई सय ६६ सक्रिय संक्रमित छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका बाहेक केहीलाई राँझा विमानस्थलनजिकैको ह्वाइट हाउस आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको छ भने केही होम आइसोलेसनमा छन् ।
यसअघि भेरी अस्पताल नेपालगन्जले कोरोनाको संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिने र अस्पतालहरूले थेग्न नसक्ने गरी बिरामीको चाप बढ्दा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै फेल हुनसक्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको थिया्े । पछिल्लो समय शकाका आधारमा पीसीआर परीक्षण गर्दा करिव शत प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि अस्पताल प्रशासनले सार्वजनिकरुपमै उक्त चेतावनी दिएको हो । यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो र सुविधायुक्त उक्त अस्पतालले बनाएको कोभिड वार्डहरु विरामीले भरिभराउ भइसकेको छ । तर दैनिक एक सय बढी कोरोनाका विरामीहरु थपिदै गएका छन् । अस्पताल भरिभराउ हुँदा थपिएका कोरानाका विरामी होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
१० बैशाख २०७८, शुक्रबार ११:५९ प्रकाशित